बाइक पराखीहरुको लागि होन्डा सिबी १५० आर एक्समोसन जसले यामाहा एमटी १५ सँग प्रतिस्पर्धा गर्छ कस्तो छ त ? – Krazy NepaL
बाइक पराखीहरुको लागि होन्डा सिबी १५० आर एक्समोसन जसले यामाहा एमटी १५ सँग प्रतिस्पर्धा गर्छ कस्तो छ त ?
November 3, 2020 752
काठमाडौं । होन्डाले नेपाली बजारमा कम्यूटर सेग्मेन्टदेखि निकै महंगा मोटरसाइकलको बिक्री गर्दै आएको छ । तर, विश्व बजारमा निकै चर्चामा रहेका र सफलता चुमेका केही यहाँ बिक्री हुन सक्ने मोडल समेत नेपाल ल्याएको छैन ।
यस्तोमा हामीले होन्डाले १५० सीसी क्षमताको नेपाल ल्याउन सक्ने मोडलको विषयमा जानकारी दिने प्रयास गरेका छौं । होन्डा सिबी १५० आर एक्समोसन मोडल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निकै रुचाइएको मोडल हो । होन्डाले यसलाई नेपाल भने ल्याएको छैन । कम क्षमताको भएरपनि यो प्रिमियम मोटरसाइकल हो । यसलाई नेपाली बजारमा ल्याउने हो भने यसले मूल्य, पावर, स्टाइल र पर्फमेन्सको आधारमा केटीएम ड्यूक १२५ र यामाहा एमटी १५ सँग सिधा प्रतिस्पर्धा गर्ने छ ।
होन्डा सिबी १५० आर एक्समोसन होन्डाको १५० सीसी सेग्मेन्टमा निकै पावरफुल मोटरसाइकलमा पर्छ । यसमा कम्पनीले १४९.१६ सीसी, सिंगल सिलिण्डर, लिक्विड कुल्ड, फोर भल्भ डिओएचसी इन्जिन दिइएको छ । उक्त इन्जिनले अधिकतम ९००० आरपीएममा १७.१ पीएस पावर र ७००० आरपीएममा १४.४ एनएम टर्क प्रदान गर्छ । यसमा ६ स्पीड गियरबक्स दिइएको छ ।
होन्डाले सिबी १५० आर एक्समोसनमा डायमण्ड टाइप फ्रेम दिइएको छ भने अगाडि ४१ एमएम यूएसडी फर्क र पछाडि मोनोशक दिइएको छ । मोटरसाइकललाई सुरक्षीत बनाउन यसको दुबै चक्कामा डिस्क ब्रेक दिइएको छ । यसमा अगाडि चक्कामा २९६ एमएम डिस्क र पछाडि २२० एमएम डिस्क ब्रेक रहेको छ । साथै, यसमा डबल च्यानल एबीएस उपलब्ध रहेको छ ।
होन्डा सिबी १५० आर एक्समोसनको ह्वीलवेस १२९६ एमएम, ग्राउन्ड क्लियरेन्स १३९ एमएम, ८.५ लिटरको फ्यूल ट्याङ्की, ७९५ एमएमको सिट हाइट रहेको छ । मोटरलाइकलको तौल १२५ केजी रहेको छ ।
पूर्ण डिजिटल इन्ट्रुमेन्ट कन्सोल उपलब्ध रहेको यो मोटरसाइकलमा एलइडी हेडल्याम्प, एलइडी टेल ल्याम्प जस्ता आधुनिक फिचर यसमा पाउन सकिन्छ । यदि यो मोटरसाइकल नेपाल आउने हो भने ४ लाख ५० हजार हाराहारीमा खरिद गर्न सकिने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
Posted in मनोरंजन, रोचक, समाचार
Prevनेपालमा अनलाइनबाटै बीस वर्ष मुनिका युवतीहरु यसरि धन्दा चलाउछ कुन कुन ठाऊमा
Nextबैज्ञानिकहरुको नयाँ निष्कर्ष अनुशार कोरोनाको उपचार गाँ’जा बाट हुन सक्ने
आज १९ जेठ २०७८ बुधवारको राशिफल हेर्नुहोस् निकै राम्रो छ
ढाड दुख्ने समस्या छ कपुर हुनेछ यसरी अचूक औषधी